पहिलोपटक आयोजित मेला व्राण्डको रुपमा अघि वढ्नेछ :- देवराज गैह्रे::Ranga post
पहिलोपटक आयोजित मेला व्राण्डको रुपमा अघि वढ्नेछ :- देवराज गैह्रे
यहि भदौं १५ गतेदेखी २१ गतेसम्म बुटवलमा ‘प्रथम वुटवल तिज महोत्सव’ हुदैछ । मौलीक चाड संस्कृती र परम्परा हाम्रो शान, तिज पर्व संरक्षण हाम्रो अभियान भन्ने भनाइसहित आयोजना हुन लागेको यो मेलाको तयारी निकै तिव्र गतिमा अघि वढेको आयोजकले जनाएको छ । क्लासिक साउण्ड एण्ड मिडिया सर्भिसेज प्राली र न्यु सत्यसाई कला केन्द्र बुटवलको आयोजना तथा बुटवल उपमहानगरपालीकाको सह आयोजनामा हुन लागेको मेलालाई भव्य वनाउन आयोजक टिम कम्मरकसेर लागेको छ । तिजको छेको पारेर १५ देखी २१ सम्म हुने सो कार्यक्रम वुटवल मण्डपमा हुने जनाईएको छ । अहिले प्रचास प्रसार तथा अरु विभीन्न तयारी गरिरहेको मेला आयोजकमध्येको एक क्लासिक साउण्ड एण्ड मिडिया सर्भिसेजका म्यानेजिङ डाईरेक्टर तथा मेलाका मुल आयोजक समितीका संयोजक देवराज गैह्रेसँग रामजी ज्ञवालीले गरेको छोटो कुराकानी ।
यो तिज मेला गर्नुको उदेश्य के हो ?
– बुटवल र आसपासका जिल्लाका महिला दिदीवैनीहरुलाई तिज पर्वको अवसरमा रमाईलो दिनुका साथै किनमेलको वातावरण वनाउने र तिजलाई परम्परागत, मौलीक तरिकाले मनाउने, पुरानो तिज गितको स्वाद दिलाउने उदेश्यले यो मेला गर्दैछौं । खासगरि यो महोत्सववाट पुरानो र लोप हुन लागेको त्यतिवेलाका मौलीक गितलाई पुनस्थापित गर्न महत्वपुर्ण भुमिका खेल्नेछ ।
मेलामा पुग्ने दर्शकहरुका लागी के कस्तो आकर्षण छ ?
– उपस्थित महिला तथा दिदी वहिनीहरु र अरु दाजुभाईहरु र समग्र रुपमा त्यहाँ प्रवेश गर्नेहरुका लागी हामीले कहिल्यै नभुल्ने कुनै कार्यक्रममा गएर फर्किएको महसुस गराउनेछौं । मेलामा विशेष त प्रथम मिस तिज वुटवल, खुल्ला तिज गित प्रतियोगीता, प्रथम तिज डान्स आईडल हुनेछ भने यो आईडलमा सहभागीले तिजकै भाकामा नृत्य गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै विद्यालयस्तरिय तिज गित प्रतियोगीता, हरेक दिन विभीन्न चर्चित कलाकारहरुको प्रस्तुतीमा कार्यक्रम हुनेछ भने मेलामा १ सय स्टल समेत रहनेछन् । जहाँ विभीन्न प्रकारका चाहिने कुराहरु पाईनेछ । यि सवै स्टलहरु वुकिङ लगभग भैसकेका छन् । यस्तै वालउद्यान, होटल तथा रेष्टुरेन्टको पनि व्यवस्था हुनेछ ।
यो मेला सम्पन्न गर्नका लागी कति खर्च लाग्ने अनुमान गर्नुभएको छ ?
– मेला सम्पन्न गर्न धेरै चुनौती पनि छ । मेला सम्पन्न गर्दासम्म २० लाखदेखी २५ लाखसम्मको खर्च लाग्ने अनुमान हामीले गरेका छौं । यि सवै स्टल, टिकट र विज्ञापन स्पोन्सरवाट उठाउनेहो ।
मेलामा कति दर्शक आउने अपेक्षा राख्नुभएको छ ?
– यो पहिलोपटक आयोजना गरिएको मेला भएकाले ठ्याक्कै यति दर्शक भन्ने सक्ने अवस्था छैन । यद्यपी हामीले ५० हजार भन्दा वढि दर्शकले कार्यक्रममा भेट गर्नुहुने अनुमान राखेका छौं । हामीले यसअघि पनि धेरैपटक यस्ता खालका कार्यक्रम गरिसकेका छौं, त्यसको पुरा पाठले पनि यसपटकको मेला सम्पन्न गर्न सहज हुनेछ भन्ने आशा पनि राखेका छौं ।